Wisdom House Books 1.1 APK Download - Android Books & Reference Apps
APK Downloader Apps Books & Reference Wisdom House Books 1.1
Wisdom House Books 1.1 APK
1.1 / September 22, 2019
Wisdom House စာအုပ်တိုက် အနေဖြင့် စာဖတ်သူများ၏ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးထက်မြက်စေရေးအတွက် သုတ၊ ရသ ဆိုင်ရာ စာအုပ်များကို ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ထိုသို့ ထုတ်ဝေရာတွင် စာဖတ်သူတို့ လက်တွေ့ အသုံးတည့်စေရန်၊လက်တွေ့အသုံးချ၍ရရန် စာများကို ဦးတည် ထုတ်ဝေထားသည်။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာအုပ် လက်ဝယ် မရှသေးသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များမှ စာများကို လေ့လာ မြည်းစမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စီနှင့် အခြား သိမှတ်ဖွယ် ကောက်နုတ်ချက်များကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။ စာဖတ်သူများ၏ တန်ဖိုးရှိသော ဦးနှောက်များ၌တန်ဖိုးရှိသော အသိအမြင် အတွေးအခေါ်များ ကိန်းဝပ်နိုင်စေရေး အတွက်အားထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ သတင်းပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။Wisdom House Books App တွင် Zawgyi Font အသုံးပြုထားသည့်အတွက်မိမိတို့ Android ဖုန်းတွင် ၎င်း Font ရှိမှသာလျှင် အဆင်ပြေစွာဖတ်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Internet အသုံးပြု၍ တစ်ခါ Downloadလုပ်ထားရုံဖြင့် စာအုပ်များအားလုံးကို Internet မလိုတော့ဘဲ လေ့လာမြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါပြီ။
App Information Wisdom House Books
#07-492 829 YISHUN ST 81 SINGAPORE 760829
Wisdom House Books Version History
Select Wisdom House Books Version :
Wisdom House Books 1.0 APK File
File Sha1: f8d9bdf44ae2e83713f2a0e8b9666da53aee18e2
APK Signature: 450728fcc0e3ae196438cbc859d9f45f2a9aef95
Thein Show More...
Myanmar Law 2.4 APK
ဥပဒေများသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပြည်သူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်အထွေထွေကို ထိုဥပဒေများဖြင့် ထိန်းကျောင်း ပဲ့ကိုင်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ပြည်သူတို့ကလည်း မိမိတို့လျှောက်ချင်သော ခရီးကိုထိုဥပဒေယာဉ် ယန္တယားအမျိုးမျိုးတို့ကို ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပေါက်မြောက်အောင် လိုက်ပါစီးနင်းကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာရည်မှန်းချက်ခရီးကို အချိန်တိုအတွင်း ခရီးပေါက်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးကြမည့်အမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အရာရာ ဥပဒေနှင့်အညီသာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပြည်သူတစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအသီးသီးကိုသိရှိအောင် လေ့လာဖတ်ရှုရပါမည်။ မိမိတို့နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာသည့်ကိစ္စတိုင်းအတွက် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ပါလျှောက်လှမ်းရပါမည်။သို့မှသာ စည်းကမ်းဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ App ကလေးမှာ ZawgyiFont ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ အဲဒီ Font ကိုဖတ်လို့ရမှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ် ဥပဒေ ၅၀ ကျော်နဲ့ စပြီးမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဥပေဒတချို့ကို Free ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ဖြည်းဖြည်းချင်း သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဥပဒေများကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဥပဒေတစ်ခုချင်းစီရဲ့နည်းဥပဒေများကိုလည်း စီစဉ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီ App ကလေးအများအကျိုးရှိပြီး ပိုပြီး အသုံးတည့်လာဖို့ သုံးစွဲကြည့်သူများထံမှအကြံအများကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၁ (Lite) 2.2 APK
ဒီ Say It Right အင်္ဂလိပ် စကားပြော Mobile App ကတော့ မူရင်းစာအုပ်နဲ့CD မှ အကြောင်းအရာများကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး စကားပြောကြပုံများကိုပါထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ Say It Right စာအုပ်ရဲ့ ပထမတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသူများအတွက် စကားပြော အသုံးအနှုန်းများကိုရှင်းလင်းချက်များနှင့် တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အခန်း တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးတွင် စကားပြောဆိုကြပုံများကို နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီApp ကလေးကနေ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို လေ့လာမှတ်သားပြီး စကားပြောနှင့်နားထောင်မှု စွမ်းရည် တိုးတက်လာနိုင်ပါစေ။
Basic Korean Speaking 1.1 APK
အခြေခံ ကိုးရီးယား စကားပြော App ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးရီးယားစကားပြောကို အခုမှ စပြီး လေ့လာသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ App ကလေးကို မ၀ယ်ခင် Basic Korean Speaking Lite ကို အရင်စမ်းသုံးစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာစာတွေ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ မှန်ကန်စွာပေါ်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ App ကလေး ပိုပြီးကောင်းလာဖို့ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို ကြိုဆိုပါတယ်။ :)This Basic Korean SpeakingApp is intended for those Myanmar people around the world who canread and speak native Burmese language.Korean language is verysystematic and we bring each component to be able to learn easilyand effectively. We provided the sound of each alphabet and takeyou to learn related vocabularies with the sound as well.After thealphabet components, writing style, phonetic, suffix words whichare very important to be skilled at speaking Korean and many moredaily speaking Korean sentences.Warmly welcome any constructivesuggestion to improve this App and we will try to add the value forall.Before you consider to buy this, please try out Basic KoreanSpeaking Lite version first so that you can have it installcorrectly and read Myanmar words accurately.한국어를 공부하신 미얀마 사람들 위한기초한글 배우기 입니다 !
EPS-ToPIK I 2.4 APK
တောင်ကိုရီးယားသို့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင် လိုသူများ ဖြေဆိုရမည့် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ အထောက်အကူ Appကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ကလေးကို အခန်းပေါင်း ၃၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အခန်းအလိုက် စကားပြော၊ ဝေါဟာရ၊ သဒ္ဒါ လေ့ကျင့်ခန်း၊Tip၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ရန် အခန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဖတ်ရန်နှင့် နားထောင်ရန်စသည့်ဖြင့် မူရင်း စာအုပ်ကို ဘာသာပြန် တည်းဖြတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲတွင် လေ့ကျင့် မှတ်သားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားတာပါ။ အခန်း ၆ အထိ Freeလေ့လာ မှတ်သားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် အခန်းများ အားလုံးကိုလေ့လာလိုပါက ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရန်လမ်းညွှန်ကို App ထဲတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ App ကလေး အရွယ် အစားသည် 45Mb လောက်ရှိပြီး အသံဖိုင်များကိုလည်း App ကလေး အသုံးပြု၍ အင်တာနက်မှဒေါင်းယူနိုင်ရန် စီစဉ် ထားပါတယ်။ အသံဖိုင်း အားလုံး အရွယ်အစား 66 Mbလောက်ရှိပါတယ်။ ဒီ App ကလေးကို မြန်မာဘာသာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်လေ့လာနိုင်ရန် ထည့်သွင်း ပေးထား ပါသေးတယ်။
Learn Kr. Songs 2.3 APK
For those Myanmar people who want to learn Korean language by itssongs. App include song translations in Burmese, usage andvocabulary.
Learning Burmese 1.3 APK
This isapro version of Learning Burmese where you can have allcontents which is not available in Learning Burmese Lite. Please,try Free Lite Version first before you consider this.
Myanmar Investment Law 2.1 APK
Knowing one's country rules and regulations will beagood choiceif one is going to land in that country. For this purpose, we wantto help understand the Myanmar investment law for those who want tomake some investment within or across the country. We want to bringaboutaReference App regarding related laws for educationalpurpose. So, please advise to make this App useful or any feedbackand suggestion is warmly Welcome. ဥပဒေအသိပညာ ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ဥပဒေများကို လေ့လာမှုလွယ်ကူမှုရှိစေမည့် Android App တစ်ခု ကြိုးစားဖန်တည်းထားပါတယ်။ မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ App ကလေးမှ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးတစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်။ဤဥပဒေကို လေ့လာကြမည့် ပညာရှင်များအနေဖြင့် အားနည်းချက်များတွေ့ရှိ်ပါကအပြုသဘော ဝေဘန်သုံးသပ်၍ အကြံညဏ်ပေးနိုင်ပါက ကြိုဆိုလက်ခံပြီးကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် နောက်ထွက်မည့် ဥပဒေများကို ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။